5 Zvisinei, vanhu nemadzimai avo vakachemera+ hama dzavo dzechiJudha kwazvo.+ 2 Kwaiva nevaiti: “Tiri kupa vanakomana vedu nevanasikana vedu sechokumbofanobata kuti tiwane zviyo, tidye, tirarame.”+ 3 Uye kwaiva nevaiti: “Tiri kupa minda yedu neminda yedu yemizambiringa nedzimba dzedu sechokumbofanobata+ kuti tiwane zviyo panguva yokushomeka kwezvokudya.” 4 Uye kwaiva nevaiti: “Takakwereta mari yomuripo wamambo+ paminda yedu neminda yedu yemizambiringa.+ 5 Zvino miviri yedu yakafanana nemiviri yehama dzedu;+ vanakomana vedu vakafanana nevanakomana vavo, asi tarirai isu tiri kuita kuti vanakomana vedu nevanasikana vedu vave varanda,+ uye kune vamwe vanasikana vedu vatova vakadaro; uye maoko edu haana simba, minda yedu neminda yedu yemizambiringa zvayava yevamwe.” 6 Zvino ndakatsamwa kwazvo pandakangonzwa kuchema kwavo nemashoko aya. 7 Naizvozvo ndakafungisisa mumwoyo mangu, ndikatanga kuwanira mhosva+ vanokudzwa nevatevedzeri vevatongi, ndikati kwavari: “Muri kureva chimbadzo,+ mumwe nomumwe pahama yake.” Uyezve, ndakavarongera gungano guru.+ 8 Ndakati kwavari: “Isu takadzikinura+ hama dzedu dzechiJudha dzakanga dzakatengeswa kune mamwe marudzi, patakagona napo; zvino imi motengesa hama dzenyu,+ uye dzinofanira kutengeswa kwatiri here?” Vakanyarara, vakashaya neshoko zvaro.+ 9 Ndakati: “Chinhu chamuri kuita hachina kunaka.+ Hamufaniri kufamba muchitya+ Mwari wedu+ here nokuda kwokuzvidza+ kwemamwe marudzi, ivo vavengi vedu?+ 10 Uyewo ini, hama dzangu nevashandi vangu tiri kuvakweretesa mari nezviyo. Ndapota, ngatiregei kukweretesa uku tichiwana mubereko.+ 11 Ndapota, vadzorerei nhasi minda yavo,+ minda yavo yemizambiringa, minda yavo yemiorivhi nedzimba dzavo, nechikamu chimwe chete pazvikamu zana zvemari nezvezviyo, waini itsva nemafuta chamuri kureva kwavari somubereko.” 12 Ivo vakati: “Tichadzorera,+ uye haticharevi chinhu kwavari.+ Tichaita chaizvoizvo sezvamuri kutaura.”+ Naizvozvo ndakashevedza vapristi ndikaita kuti vapike kuti vaite maererano neshoko iri.+ 13 Uyewo, ndakazunza nguo dzangu nechepachipfuva changu ndikabva ndati: “Saizvozvi Mwari wechokwadi ngaazunze mumba make nepapfuma yake yakawanwa, munhu wose asingaiti shoko iri; uye saizvozvi ngaazunzirwe kunze, ave asina chinhu.” Ungano yose ikati: “Ameni!”+ Zvino vakatanga kurumbidza Jehovha.+ Uye vanhu vakaita maererano neshoko iri.+ 14 Chimwe chinhu chaiva chokuti: Kubvira pazuva raakandiita gavhuna wavo+ munyika yeJudha, kubvira pagore rechimakumi maviri+ kusvikira kugore rechimakumi matatu nemaviri+ ramambo Atashasta,+ makore gumi nemaviri, ini nehama dzangu hatina kudya zvokudya zvaifanira kupiwa gavhuna.+ 15 Kana ari aimbova magavhuna akanga anditangira, akanga aremedza vanhu, uye zuva nezuva akaramba achitora kwavari mashekeri makumi mana esirivha nokuda kwezvokudya newaini. Uyewo, vashandi vavo vaidzvinyirira vanhu.+ Asi ini handina kuita izvozvo+ nokuti ndaitya Mwari.+ 16 Ndakashandawo pabasa rorusvingo urwu,+ uye hatina kuwana kunyange munda;+ uye vashandi vangu vose vakanga vakaunganira basa ikoko. 17 VaJudha nevatevedzeri vevatongi, varume zana nemakumi mashanu, nevaya vaiuya kwatiri vachibva kune mamwe marudzi akanga akatipoteredza vaiva patafura yangu.+ 18 Kana zviri zviya zvaigadzirwa zuva nezuva, zvandaigadzirirwa zvaiva, nzombe imwe chete, makwai matanhatu akanaka pamwe chete neshiri, uye kamwe chete pamazuva gumi oga oga waini yemarudzi ose+ yakawanda. Pamwe chete naizvozvi handina kurayira zvokudya zvaifanira kupiwa gavhuna, nokuti basa raiitwa nevanhu ava rairema. 19 Haiwa Mwari wangu, ndiyeukirei+ zvose zvandakaitira vanhu ava,+ nenzira yakanaka.+